I-YouTube idibanisa ngakumbi nangcono ngeChromecast nge-iPhone | IPhone iindaba
Kuyinyani ukuba iChromecast lelona qabane lilungileyo kwigumbi lokuhlala kunye nasemva kwemini bhanyabhanya, nangona kunjalo, amathuba eChromecast kwi-iOS mancinci kunalawo sinokuwafumana kwi-Android, ngakumbi kuba ayinayo iPiP (isasaza ngqo iscreen se I-iPhone ngokusasaza). Nangona kunjalo, Kancinci kancinci kongeza amandla ngakumbi kwizixhobo zethu ze-iOS ezenza ukuthengwa kwesi sixhobo kubonakale ngakumbi. Kutshanje i-YouTube idityaniswe ngakumbi nangcono ngeChromecast nge-iPhone, ivumela amanyathelo amaninzi ukusuka kwiscreen sokutshixa, kwaye ngaphezulu kwako konke, ukongeza ukusebenza kwiApple Watch yethu.
Ke, isicelo seYouTube sihlaziyiwe kutshanje kwiVenkile yeApp ye-iOS, ngaphandle koku, awuyi kufumana nantoni na kumanqaku ohlaziyo, apho sinokufunda khona kuphela "Silungise iimpazamo ezahlukeneyo kunye nozinzo oluphuculweyo", Nangona kunjalo, le misebenzi siphawula ngayo intsha ngokupheleleyo kwaye ibingafumaneki ngaphambi kohlaziyo.
Ngale nto, sifuna ukuthi emva kohlaziyo lwe-YouTube, ngoku sinokulawula umxholo wayo xa sisasaza ngeChromecast kwaye sinayo i-iPhone / iPad evaliweyo. Kodwa ayizukuhlala kuphela kwiscreen se-iOS, inokuba kungenjalo njani, le nto intsha igqithiselwa phantse kuyo yonke iwotshi ehlakaniphileyo yenkampani yeCupertino. Icandelo "lokudlala ngoku" leApple Watch liya kuthi lisivumele ukuba siguqule iiparameter zokudlala kwakhona kunye nevolumu ngokuthe ngqo kuwotshi.
Ngale ndlela, sinokusebenzisa iYouTube njengesidlali somculo ekhaya, sisebenzisa amandla okudityaniswa kweChromecast kunye neemveliso ze-iOS emva kolu hlaziyo lutsha. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngesi sixhobo, Sishiya apha uhlalutyo esilwenzileyo ngomhla walo nazo zonke iinkcukacha. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-YouTube idibanisa ngakumbi nangcono ngeChromecast nge-iPhone